Miyuu Jan Vertonghen Uu Diyaar U Noqon Karaa Finalka Champions League Ee Liverpool? - Gool24.Net
Miyuu Jan Vertonghen Uu Diyaar U Noqon Karaa Finalka Champions League Ee Liverpool?
Kooxda Tottenham ayaa ka walwalsan dhaawicii difaaca kooxdeeda ee Jan Vertonghen ku soo gaadhay kulankii Ajax wuxuuna seegay kulankii Premier league ugu danbeeyay ee Everton.
Jan Vertonghen ayuu dhaawac soo gaadhay qaybtii hore ee kulankii Ajax ee lugtii labaad ee UEFA Champions league wuxuuna qaybtii labaad ku ciyaaray isaga oo dhaawac ah taas oo xaaladiisa sii xumaysay.
Kadib markii ay Tottenham soo laabashada cajiibka ahayd ka samaysay Ajax, waxaa la arkay difaaca reer Belgium ee Jan Vertonghen oo garoonka Ajax kaga baxaya biro uu ku boodayay isla markaana ay lugtu u duuban tahay.
Laakiin Jan Vertonghen ayaa saaxiibadiisa u sheegay in uu ku kalsoon yahay in uu taam u noqon karo kulanka finalka Champions League ee ay Tottenham la ciyaari doonto Liverpool.
Laakiin sida uu qoray wargayska Telegraph, Jan Vertonghen ayaa asxaabtiisa u sheegay in aanu hubin in uu boqolkiiba boqol uu taam u noqon karo finalka Champions League ee Liverpool balse uu rajo ka qabo in uu safan karo.
Tababaraha kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa rajaynaya in Harry Kane iyo Jan Vertonghen ay diyaar u noqo karaan kulanka Liverpool taas oo haddii ay dhacdo kooxdiisa xoojin wayn u noqon doonta.
Jan Vertonghen ayaa haysta saddex todobaad oo uu kaga soo kabsado dhaawicii canqoga kaga soo gaadhay kulankii Ajax laakiin sida uu taam buuxa ugu noqon karo kulan u xoogan sida finalka Champions League ayaa ah mid aad u adag.
Harry Kane oo dhaawac ku maqnaa tan iyo kulankii lugtii hore ee Champions League ee ay Man City guusha ka gaadheen ayaa bilaabay in uu dagaal u galo sidii uu taam ugu noqon lahaa finalka Champions League balse waxaa xaaladiisa xumaynaysa in uu waqti waqti badan u baahan yahay.
Si kastaba ha ahaatee, Jan Vertonghen ayaa aaminsan in uu wali suurtogal ka dhigi karo in uu diyaar u noqdo finalka Champions League ee Liverpool.
Dhinaca Liverpool waxaa dagaal ku jira Roberto Firmino oo isna dhaawac ku seegay kulamadii ugu danbeeyay oo ay ku jirtay soo laabashadii Barcelona iyo kulankii Wolves ee Premier league lagu soo gaba gabeeyay.